औषधि सेवन गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिऔँ ! - सुनाखरी न्युज
औषधि सेवन गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिऔँ !
Posted on: April 13, 2019 - 3:42 pm
सुनाखरी न्युज \_
औषधि बिरामीको उपचारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि औषधि सेवनमा ंहामीहरुले गल्ती गरिराखेको हुन्छौ ।
कहिले काही औषधिको साइडइफेक्ट पनि हुन सक्छ । हाम्रो स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधिको बारेमा जस्तै विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिले पनि चासो दिएको पाइँदैन । औषधि खाएको एक महिना पछि मात्रै त्यो औषधिको सेवन गर्ने मिति सकिएको रैछ भन्ने थाहा पाउँछौ अर्थात किन्ने बेलामा औषधि सेवनको मिति कहिले सम्म हो भन्ने विषयमा खासै ध्यान जाने गरेको छैन । जुन कुराले बिरामीलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
औषधिको एकातिरको भागमा औषधिको नाम र कम्पनी अनि डोज लेखेको हुन्छ भने अर्को भागमा औषधि सेवनको मिति लेखिएको हुन्छ ।